The Ab Presents Nepal » विषादी परिक्षण गरेर मात्रै भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न सर्वोच्चको आदेश ! अब सरकार के गर्छ?
काठमाडौँ -: सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको अवस्थासमेत हुँदा यस सन्दर्भमा २०७६ असार २ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत हुने गरी सोही मन्त्रीस्तरीयबाट २०७६ असार १८ मा गरिएको निर्णय संविधान र कानुनका यी समस्त व्यवस्थाहरूको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ| आदेशमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सर्वोच्चले देखाएको बाटो तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए ।अदालतको आदेश सबैले परिपालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ बानियाँले भने अदालतको आदेश पालना नभए मानहानि मुद्दामा जान्छौं ।तरकारी परीक्षणमा कडाइ भएपछि भारतीय दूतावासका अधिकारीले दैनिक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दैनिक दबाब दिएका थिए ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन ग्रुपका विषादी प्रयोग गरिन्छन् । केन्द्रमा ७ वटा प्रयोगशाला छ । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ ।